မကြာမီ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ချစ်သူငယ်ချင်းသီရိရှင်းသန့်ကို ပျော်ရွင်စရာပါတီပွဲလေးနဲ့ Surpriseလုပ်ခဲ့တဲ့ ခင်လေးနွယ်နဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် – Nyi Ma Lay
မကြာမီ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ချစ်သူငယ်ချင်းသီရိရှင်းသန့်ကို ပျော်ရွင်စရာပါတီပွဲလေးနဲ့ Surpriseလုပ်ခဲ့တဲ့ ခင်လေးနွယ်နဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
By Ko AyePosted on March 11, 2022
သရုပ်ဆောင် နဲ့ မော်ဒယ်လ် သီရိရှင်းသန့် ကတော့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မျက်နှာ ဝိုင်းဝိုင်းလေး နဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြား ထင်ရှားသူ တစ်ယောက် ပါပဲ။ သီရိရှင်းသန့် ဟာ သူမ ချစ်မြတ်နိုးရ သူရဲ့ လက်ထပ်ခွင့် ကို လက်ခံလိုက် ပြီး မကြာခင် အချိန် အတွင်းမှာ လက်ထပ်တော့ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ မှာတော့ မကြာခင် လက်ထပ် တော့မယ့် သူမ ကို အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်လေးနွယ် နဲ့ အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင်၊ ဒီဇိုင်နာ မပုံ့ တို့က Surprise ပါတီပွဲ ကျင်းပ ပေးခဲ့ ကြောင်း သီရိရှင်းသန့် က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာ ကနေ တဆင့် ပြောလာ ပါတယ်။
သီရိရှင်းသန့် က “🧡Thiri Sold Out 🧡👰‍♀️💍💐 အခြေ အနေ အမျိုးမျိုး ကြောင့် ဘဝမှာ “ Bridal Shower “ ဆိုတာ ကိုယ့် အတွက် မရှိတော့ဘူး လို့ ထင်ထား ခဲ့တာ ချစ်တဲ့သူတွေ ကြောင့် အရမ်းလဲ suprise ဖြစ်ခဲ့ ရသလို မျက်ရည် ဝဲအောင် ပျော်ခဲ့ ရတယ် …. တကယ် ကို ဘဝမှာ အမှတ်တရ ပါပဲ ….. 🥰🧡 ကိုယ်လုံးဝ မရိပ်မိအောင် စီစဉ်နိုင်တာ နည်းတဲ့ စကေးလား ???? ☺️ Bridal Shower လေး လုပ်ခွင့် ရလို့ အားလုံးကို ကျေးဇူး တင်တယ် …. 🙏
🥰 ချစ်ပြီး Suprise ဝိုင်း တိုက် သေချာလေး စီစဉ် ပေးကြ တဲ့ မမခင်ခင် Khin Lay Nwe ချစ် ဒီး San Lwinချစ် မ Ma Pont ချစ် မာမား Mary Nelsonbo မလာနိုင် ပေမယ့် ချစ်ပေးတဲ့ M Jar Aung Lin Phyu ဓါတ်ပုံ လှလှ လေး မှတ်တမ်း တင် ပေးတဲ့ မောင်လေး ရဲကျော်ဖြိုး … အားလုံး ကို ချစ်တယ်နော် …. 😘😘😘🧡🧡🧡” ဆိုပြီး အပျော် တွေနဲ့ မျှဝေလာ ပါတယ်။ သီရိရှင်းသန့် ကတော့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေ စီစဉ် ပေးတဲ့ Bridal Shower ပွဲလေးကို ဆင်နွှဲ ခွင့် ရရှိခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီရိ ကတော့ အလိုက် သိပြီး ဂရုစိုက်လွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ကောင်းတွေ ကြောင့် ဘဝရဲ့ အမှတ် တရ လေးကို ဖန်တီး နိုင်ခဲ့ ပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ သီရိရွင္းသန႔္ ကေတာ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာ ဝိုင္းဝိုင္းေလး နဲ႔ ပရိသတ္ေတြ ၾကား ထင္ရွားသူ တစ္ေယာက္ ပါပဲ။ သီရိရွင္းသန႔္ ဟာ သူမ ခ်စ္ျမတ္နိုးရ သူရဲ့ လက္ထပ္ခြင့္ ကို လက္ခံလိုက္ ၿပီး မၾကာခင္ အခ်ိန္ အတြင္းမွာ လက္ထပ္ေတာ့ မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ မွာေတာ့ မၾကာခင္ လက္ထပ္ ေတာ့မယ့္ သူမ ကို အခ်စ္ဆုံး သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခင္ေလးႏြယ္ နဲ႔ အဆိုေတာ္ စႏၵီျမင့္လြင္၊ ဒီဇိုင္နာ မပုံ႔ တို႔က Surprise ပါတီပြဲ က်င္းပ ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သီရိရွင္းသန႔္ က သူမရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ ကေန တဆင့္ ေျပာလာ ပါတယ္။
သီရိရွင္းသန႔္ က “🧡Thiri Sold Out 🧡👰‍♀️💍💐 အေၿခ အေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ဘဝမွာ “ Bridal Shower “ ဆိုတာ ကိုယ့္ အတြက္ မရွိေတာ့ဘူး လို႔ ထင္ထား ခဲ့တာ ခ်စ္တဲ့သူေတြ ေၾကာင့္ အရမ္းလဲ suprise ျဖစ္ခဲ့ ရသလို မ်က္ရည္ ဝဲေအာင္ ေပ်ာ္ခဲ့ ရတယ္ …. တကယ္ ကို ဘဝမွာ အမွတ္တရ ပါပဲ ….. 🥰🧡 ကိုယ္လုံးဝ မရိပ္မိေအာင္ စီစဥ္နိုင္တာ နည္းတဲ့ စေကးလား ???? ☺️ Bridal Shower ေလး လုပ္ခြင့္ ရလို႔ အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္တယ္ …. 🙏
🥰 ခ်စ္ၿပီး Suprise ဝိုင္း တိုက္ ေသခ်ာေလး စီစဥ္ ေပးၾက တဲ့ မမခင္ခင္ Khin Lay Nwe ခ်စ္ ဒီး San Lwinခ်စ္ မ Ma Pont ခ်စ္ မာမား Mary Nelsonbo မလာနိုင္ ေပမယ့္ ခ်စ္ေပးတဲ့ M Jar Aung Lin Phyu ဓါတ္ပုံ လွလွ ေလး မွတ္တမ္း တင္ ေပးတဲ့ ေမာင္ေလး ရဲေက်ာ္ၿဖိဳး … အားလုံး ကို ခ်စ္တယ္ေနာ္ …. 😘😘😘🧡🧡🧡” ဆိုၿပီး အေပ်ာ္ ေတြနဲ႔ မၽွေဝလာ ပါတယ္။ သီရိရွင္းသန႔္ ကေတာ့ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္းေတြ စီစဥ္ ေပးတဲ့ Bridal Shower ပြဲေလးကို ဆင္ႏႊဲ ခြင့္ ရရွိခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သီရိ ကေတာ့ အလိုက္ သိၿပီး ဂ႐ုစိုက္လြန္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေကာင္းေတြ ေၾကာင့္ ဘဝရဲ့ အမွတ္ တရ ေလးကို ဖန္တီး နိုင္ခဲ့ ၿပီပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္။
Previous post ကွယ်လွန်သွားတာ (၈)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ချစ်သူလေးအတွက်ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်
Next post သမီးလေးရဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူကြောင့် အံ့ဩသွားတဲ့ ဖေဖေစည်ဖြိုး